कहिल्यै भारी वर्षा वा हिउँ मा भाँचिएको गाडीको अगाडीको शिशा wipers संग कार यात्रा छ जो कोहीले, यो खतरनाक छ कसरी गाह्रो बताउन सक्छ। यो स्थितिमा झर्ने जोगिन, तपाईं असल समय मा wiper ब्लेड अवस्था अनुगमन गर्न र तिनीहरूलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक छ।
यस लेखमा हामी कुन VAZ-2110 को caretakers छन् बारेमा कुरा हुनेछ। हामी पनि wiper संयन्त्र को डिजाइन विचार र यसको सबै भन्दा साधारण समस्या सामना।
को wiper "दसौं" कसरी
संयन्त्र क्लीनर VAZ-2110 windscreen निम्न तत्त्वहरू हुन्छन्:
समलम्ब (यांत्रिक गियर);
नियन्त्रण एकाइ (मोड स्विच);
विद्युत सुरक्षा तत्व;
Wiper ब्लेड VAZ-2110 एक विद्युत मोटर द्वारा संचालित छन्। यसको डिजाइन यो तीन अलग अलग गति मोड मा सञ्चालन गर्न सक्छन् धन्यवाद जो गियर र तीन वर्तमान-आपूर्ति ब्रश सामेल छन्। मोटर wiper VAZ-2110 को गाडीको अगाडीको शिशा तल सजावटी जंगला अन्तर्गत एक विशेष खण्ड मा स्थित छ।
Wiper ड्राइव adjustably एक समलम्ब को रूप मा परस्पर levers र छड को एक प्रणाली छ। यो गाडीको अगाडीको शिशा अन्तर्गत इन्जिन कक्ष मा स्थित छ, र फिर्ता र निस्कने एक घूमएर मा मोटर शाफ्ट को rotational गति रूपान्तरण गर्न डिजाइन गरिएको छ। यसरी, समलम्ब wipers VAZ-2110 synchronously र एउटै विमान मा सार्न गर्न ब्रश गराउँछ।
Wiper संयन्त्र दायाँ स्टीयरिंग स्तम्भ मा एक अलग स्विच नियन्त्रित छ। यसलाई चार मोड छ:
निष्क्रिय (VAZ-2110 wipers घरबार अवस्थामा छन्);
अनिरंतर (एक निश्चित अन्तराल मा सार्ने ब्रश);
ड्राइभ बिजुली wipers भएकोले यसको सर्किट एक फ्यूज सुरक्षित। यो मुख्य मा स्थित छ विधानसभा ब्लक र फा-5 रूपमा डिजाइन गरिएको छ। तपाईं wipers VAZ-2110 सञ्चालन भने छैन, र समस्या निवारण उहाँलाई सुरु राम्रो सधैं छ।
को ब्रश को आवृत्ति Sweeps intermittently छुट्टै रिले द्वारा शासित। यो मुख्य सर्किट ब्लक मा पनि छ र K-2 रूपमा उल्लेख। वाचमैन को "दस" काम को PERIODICITY उल्लङ्घन को मामला मा प्रतिस्थापित हुनुपर्छ। निदान वा रिले अव्यावहारिक छ मर्मत यो एक सानो भन्दा बढी 200 rubles लागत किनभने गर्ने प्रयास गर्नुहोस्।
को ब्रश गर्न सीधा सनकी समलम्ब देखि शक्ति प्रसारित कि संयन्त्र को तत्व - Leashes VAZ-2110 wipers। अर्को शब्दमा, यो रैक, जो, वास्तवमा, wipers को गाडीको अगाडीको शिशा मा सार्न। को समलम्ब द्वारा तिनीहरूले splines र फिक्सिंग पागल को माध्यम द्वारा fastened छन्। को पट्टा वाचमैन "दस" को अन्त मा एक हुक को रूप मा एक विशेष संलग्न छ।
स्थापित ब्रश VAZ-2110 तीन तत्व समावेश:
उपकरण फ्रेम धातु बनेको र एक समग्र निर्माण एक मुख्य रैक र दुई थप disposed thereon समावेश जो छ छ। को ब्रश नरम रबर बनेको छ। यसको काम सतह को बीचमा एक अनुदैर्ध्य protrusion (कूटक) वास्तवमा सफा जो र ग्लास छ। आफ्नो स्लट प्रवेश लास को ब्रश दुई अतिरिक्त रेल संलग्न छ। पाले सजिलै ग्लास मा slid गर्न, केही निर्माता ग्रेफाइट संग काम को आफ्नो भाग कवर।
मुख्य रेल को केन्द्र मा जो यो एक पट्टा संलग्न एक बन्धन संयन्त्र छ। यो मिश्रित फिक्सिंग एक नेतृत्व र एक प्लास्टिक छेस्कनी, संलग्न जो हुक लागि एउटा गाइड हो।
frameless गाडीको अगाडीको शिशा wipers
बिक्री मा frameless र ब्रश छ। डिजाइन को मुख्य सुविधा धातु फ्रेम को अभाव छ। आफ्नो भूमिका द्वारा प्लास्टिक दबाव प्लेट गरिन्छ। यी ब्रश नरम स्ट्रोक अभाव squeaking कारण cranky यौगिकों जंग छन्। साथै, तिनीहरूले "फुफकार" छन् उच्च गति मा ड्राइभिङ गर्दा।
जब तपाईं wipers परिवर्तन गर्न आवश्यक
स्रोत "desyatochnyh" ब्रश 5,00,000 चक्र छ। हामी क्षेत्र मा यी तथ्याङ्कले अनुवाद भने, उनि, सफा सक्छ त यो 50 फुटबल क्षेत्रहरू हुनेछ। तर, यो एक वर्ष एक पटक गाडीको अगाडीको शिशा wipers परिवर्तन गर्न सिफारिस गरिएको छ यो सक्छन् रूपमा हुन। र चिसो मौसम को शुरू अघि प्राथमिकताको यो के। स्वाभाविक, को wipers VAZ-2110 विगतमा यसको दक्षता गुमाउन सक्छ। यो कारण उदाहरणका लागि, क्षति सूर्य गर्न निरन्तर जोखिम कारण पनि windscreen वा विरूपण गर्न चिसो कारण हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा, को ब्रश पनि परिवर्तन हुनुपर्छ।
स्थापित wipers "दसौं" 51 सेमी को एक मानक लम्बाइ छ, र यो नै र यात्री पक्षमा स्थित छ कि चालक पक्षमा स्थित को ब्रश र छ। तर यो मानक गर्न छडी वैकल्पिक छ। लम्बाईहरू निम्न VAZ-2110 सेट गर्न सकिन्छ wipers (पक्ष चालक / यात्री, सेमी) मा:
कुनै पनि सल्लाह पालन गर्न आवश्यक भएको ब्रश लम्बाइ चयन गर्दा हो। जब सम्म तिनीहरूले स्थापना समीक्षा पछि अवरुद्ध र सुरक्षा गार्ड गर्न clung छैन।
जो एक ब्रश चयन गर्न
को वाचमैन को आकार परिभाषित भएको, पहिलो उपलब्ध मोडेल किन्न हतार छैन। तथ्यलाई सवारीसाधन बजार अब fakes संग भीड छ भन्ने छ। केही $ 100 मा Splurge, तपाईं जो प्रभावकारी केही दिनको लागि काम गरेको wipers, खरिद गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि चरचर र लीक गर्न थाल्छन्। यो चिरपरिचित उत्पादकहरु प्राथमिकता र विशेष पसलहरुमा खरीद दिन राम्रो छ। приобретать «бескаркасники» или обычные. प्राप्त "beskarkasniki" वा सामान्य - निर्माण सम्बन्ध, यहाँ तपाईं निर्णय छ। बन्धन आए कि मुख्य कुरा।
प्रतिस्थापन wiper VAZ-2110
को wipers कुनै पनि अन्य वाहन मा, त्यो कुरा को लागि, "शीर्ष दस" मा प्रतिस्थापन प्रक्रिया, यो धेरै सरल छ र तपाईं पाँच अधिक मिनेट छैन। हो र यो कुनै उपकरण आवश्यक छैन। निम्नानुसार प्रक्रिया काम गर्दछ:
यो सम्भव क्षति देखि रक्षा गर्न बाक्लो कपडा संग windscreen आवरण;
पट्टा को गाडीको अगाडीको शिशा wiper बाट बारी;
एक छेस्कनी बन्धन संयन्त्र अप cranking फ्रेम हुक पट्टा हटाउने गाइड वरिपरि 90 डिग्री द्वारा उठाउनु र यो तल सार्न,;
बन्धन हुक नयाँ wiper बोट निर्देशन र झुकन अन्त यसलाई ड्राइव यो एक छेस्कनी संलग्न सम्म।
आफ्नो सेवा जीवन विस्तार गर्न caretakers लागि कसरी हेरचाह गर्न
सकेसम्म लामो समयसम्म सेवा गर्न Wipers, यी सुझावहरू पालन:
माटो soiled ब्रश, एक नम कपडा वा स्पन्जले संग सफा हटाउन। त्यसैले तपाईं मात्र माटो को छुटकारा प्राप्त, तर पनि खरोंच देखि ग्लास सुरक्षित हुनेछ।
यस गाडीको अगाडीको शिशा धूलो एक तह ढाकिएको थियो भने, र वाहन मा वशर तरल पदार्थ माथि छ, क्लीनर समावेश छैन। यो पनि गिलास मा खरोंच को गठन गर्न नेतृत्व गर्नेछन्।
को हिउँदमा, विशेष गरी हिउँ मा, wipers, को गाडीको अगाडीको शिशा विरुद्ध झुकाव नछोड - तिनीहरूले स्थिर। यो ब्रश limbo छ भनेर leashes उठाउनु राम्रो छ।
को wipers अझै पनि स्थिर छ भने, कुनै पनि मामला मा आफ्नो बल बाहिर निकाल्न प्रयास छैन। त्यसैले तपाईं बस गम बिगार्न हुनुहुन्छ। इन्जिन सुरु गर्नुहोस्, यो गाडीको अगाडीको शिशा को उड्ने मोडमा स्टोभ सक्रिय, र यो thawed सम्म प्रतीक्षा गर्नुहोस्।
बरफ फ्रेम वा ब्रश तल गोली पनि असम्भव छ। बिस्तारै सम्म यो सानो अंश मा exfoliates सम्म गम मोड।
प्रतिस्थापन wipers पूरा, को गाडीको अगाडीको शिशा केही बाक्लो कपडा मा राखे। आफ्नो हात बाहिर नेतृत्व पर्ची वसन्त-लोड यदि यो उसलाई बचाउन हुनेछ।
फोर्ड Puma - युरोप लागि खेलकुद कार
Frameless wiper ब्लेड: स्थान, समीक्षा
स्कोडा Fabia - मालिकहरूको समीक्षा र निर्माताहरु को एक पूर्वव्यापी
दुनिया मा सस्ता कार के हुन्? सेवा मा सस्ता कार के हो?
Svetlana Bezrodnaya: जीवनी र काम
लुसी बीच होटल5* - छुट्टी प्रिमियम
Racking परीक्षण: प्रविधी
रास्पबेरी रूख: समीक्षा, वर्णन, उत्पादकत्व र हेरविचार
"Bronholitin": तैयारी को समीक्षा
वसन्त मा एक करौदा कसरी रोपेर गर्न? saplings, करौदा झाडी
शुक्रवार को 13 औं खराब दिन मानिन्छ किन छ। अन्धविश्वास को इतिहास
Zhyulen.Retsept फ्रान्सेली भोजन
कारण किन फ्ल्यास प्लेयर कसरी निवारण गर्न चलिरहेका छन्, र